Home » သတင်း » NEP Connect ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အားကစားနှင့်အတူသစ်ကို Pro14 ရပ်ဘီဆက်သွယ်မှုစာချုပ်ကိုကြေညာ
NEP Connect ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အားကစားနှင့်အတူသစ်ကို Pro14 ရပ်ဘီဆက်သွယ်မှုစာချုပ်ကိုကြေညာ
11th ဖေဖော်ဝါရီလ 2019, မီလ်တန် Keynes, ဗြိတိန် - NEP Connect ကို (ယခင်မောင်လေးကလည်းတိုက်ရိုက်), ၎င်း၏Anylive®ဖိုင်ဘာကွန်ယက်ကိုနှင့်အတူမီဒီယာဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှု၏ဗြိတိန်ရဲ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာ provider က, ကဖိုင်ဘာကွန်ယက်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပရီးမီးယားလိဂ်အားကစား, Dublin, အတူစာချုပ်အနိုင်ရသည်ဟုကြေညာခဲ့သည် HD ဂင်းနစ် PRO14 ရပ်ဘီလွှမ်းခြုံများအတွက်ဆက်သွယ်မှုန်ဆောင်မှု။
အဆိုပါဖိုက်ဘာဆက်သွယ်မှုသဘောတူညီချက် Kingspan အားကစားကွင်း, ဘဲလ်ဖတ်များပါဝင်သည်; Murrayfield အားကစားကွင်း, Edinburgh, Scotstown အားကစားကွင်း, Glasgow, ကာဒစ်ဖ်လက်နက်ပန်းခြံ; ရော့ဒ်နီ Parade, Newport, လွှတ်ခြင်းအခွင့်အားကစားကွင်း, ဆွမ်ဆီး; နှင့် Parc y ကိုနီမောင်းသောအထည်, Llanelli; အဖြစ် Dublin အတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်အားကစား '' ထုတ်လွှင့်စက်ရုံ။
ပရီးမီးယားလိဂ်အားကစားကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အော်ပရေတာအရာရှိချုပ်ရစ်ချက်ဝက်ဘ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းများကကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်သစ်ကိုအခွင့်အလမ်းများကိုဖို့ Anylive ကွန်ယက်၏အဆိုပါနိဒါန်းအနာဂတျအတှကျကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် "commented ။ ကျနော်တို့အနည်းဆုံးကြည့်ရှုတစ်ချိန်တည်းမှာအရပျကိုယူပြီးဂိမ်းထဲကနေအားလုံးအရေးကြီးအချိန်လေးကိုရောက်စေဖို့အတူတကွတိုက်ရိုက်ပွဲစဉ်ချိတ်ဆက်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်, များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သောဤကွန်ယက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် NEP Connect ကိုအတူ ပူးပေါင်း. ခံရဖို့ဝမ်းသာကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစုံဝန်ဆောင်မှုနဲ့ content ရာပူဇော်သက္ကာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်မြှင့်တင်ရန် NEP Connect ကိုနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
NEP Connect ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပရီးမီးယားလိဂ်အားကစားနှင့်အိုင်ယာလန်အတွက် Setanta မှဆက်သွယ်မှုန်ဆောင်မှုပေးထားပေမယ့်ဒီစာချုပ်ဟာ Anylive ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှုပူဇော်သက္ကာကိုခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။
NEP Connect ကိုမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာဒါဝိဒ်သည် Meynell ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့နည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကို enable "ဟုပြောသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ In-depth ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဘတ်ဂျက်အတွင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်ကနဦးလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသို့မဟုတ်ထက်ကျော်လွန်သောထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုရာပူဇော်သက္ကာအတွက်အဖြေမျာ။
"ဟုအဆိုပါ Anylive ကွန်ယက်၏ကြံ့ခိုင်သဘောသဘာဝနှင့်အတူ coupled အဲဒီစွမ်းရည်, NEP Connect ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အားကစားများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မိတ်ဖက်ပါစေ။ "
NEP Connect ကိုရဲ့ Anylive®fibကွန်ယက်ကိုပြန်လည် ပြီးသားဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်း End-user တွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများပေး low-အောင်းနေချိန်ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအရွှေ့များအတွက်ဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်တစ်လျှောက်လုံး 150 အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနေရာများထက်ပိုမိုများအတွက်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုပေးပါသည်။
ပရီးမီးယားလိဂ်အားကစား 16 သန်းဗြိတိန်နေအိမ်များနှင့်က Sky နှင့် Virgin မီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားမှတဆင့်ကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင်လူတိုင်းရရှိနိုင်မယ့် High Definition subscription ကိုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
NEP Connect ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်ကိုထောကျပံ့ကြံ့ခိုင်ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများ, မီဒီယာဖြေရှင်းချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ယခု NEP Worldwide ၏ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ NEP Connect ကိုရဲ့ဆက်သွယ်မှုန်ဆောင်မှုများ, အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် www.nepconnect.live
NEP Connect ကိုအကြောင်း
NEP Connect ကိုတစ်ဦး NEP အသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများကုမ္ပဏီ, 1989 ကတည်းကအရေးပါသောမီဒီယာအကြောင်းအရာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖိုင်ဘာကွန်ယက်Anylive®, ထုတ်လွှင့်, အဓိက switching စင်တာများ, ရုပ်သံလိုင်း ပေး. , အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနေရာများအပါအဝင် 150 နေရာများတွင်ကျော်ဆက်သွယ်။ NEP Connect ကိုကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့ပေးသော NEP Connect ကိုတယ်လီပို့နှင့်အတူပူးတွဲတည်ရှိသည်, ဗြိတိန်တွင်တည်ရှိသည်နှစ်ခုက Network စစ်ဆင်ရေးစင်တာများလုပ်ကိုင် ဂြိုဟ်တု connectivity 'ပူဇော်သက္ကာကိုဖြည့်စွက်ရန်အဆောက်အဦ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ UHD ကနေလည်းရရှိနိုင်သည့်ဒေတာနှင့်အသံထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ streaming အနိမ့်နည်းနည်းနှုန်းထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများအပြည့်အဝအကွာအဝေးပေးပါသည်။ ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောဖိုင်ဘာနဲ့ ဂြိုဟ်တု အခြေခံအဆောက်အအုံမျိုးစုံကန်ထရိုက်များနှင့်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုမှုဖြစ်ရပ်များထောက်ပံ့နေ့တိုင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ transmission ကို၏ 200 နာရီကျော်အသံလွှင့်နေတဲ့စည်းလုံးခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်အစုစုဖြစ်ပေါ်လာသော။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.nepconnect.live
30 နှစ်ကျော်အဘို့, NEP တိုက်ရိုက်အားကစား, ဖျော်ဖြေရေး, ဂီတနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဖြစ်ရပ်များ၏ဝန်ကြီးချုပ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများထောက်ပံ့နေတဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြက်ဆောင်ရွက်လာတယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုဖက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝေးလံသောထုတ်လုပ်မှု, စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု, အသံအမြင်အာရုံဖြေရှင်းနည်းများ, အိမ်ရှင်ထုတ်လွှင့်ထောက်ခံမှု, ပရီမီယံပလေးအောက်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆန်းသစ်သောဆော့ဖ်ဝဲကို-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက် post ပါဝင်သည်။ NEP ရဲ့ 3,500 + န်ထမ်းထက်သာလွန်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်နေကြသည်။ အတူတူအားလုံးခုနစ်ခုတိုက်ကြီးအပေါ် 87 နိုင်ငံများတွင်ဘဏ်ဍာထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
NEP အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရုံးချုပ်နှင့် 24 နိုင်ငံများရှိစစ်ဆင်ရေးရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ nepgroup.com.
NEP Connect ကို
UK Companies continue to dominate technology and innovation atConnecTechAsia 2019 - မေလ 29, 2019
Pixel Power collaborates with Qvest Media - မေလ 29, 2019
Anylive Firbre ကွန်ယက်ကို ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor NEP NEP Connect ကို post ကိုထုတ်လုပ်မှု ပရီးမီးယားလိဂ်အားကစား တိုက်ရိုက်မောင်လေးကလည်း လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-02-11
ယခင်: Quicklink စတူဒီယိုဂုဏ်သတင်းအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကလပ်များအတွက်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထုတ်လွှင့်
နောက်တစ်ခု: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်